Abu Majid, Ilay Manana Vina Syriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2016 7:32 GMT
Vakio amin'ny teny Svenska, Ελληνικά, English
Varavaramben'ny trano ntaolo ao Aleppo, Syria. Saripika: Bengin Ahmad (CC BY-ND 2.0
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny 11 avrily 2016 ny ôrizinaly) Nijery anay nanatona ny tranony izy. Tsy niala taminay nivoaka ny fiara mihitsy ny masony, nipetraka teo amin'ny seza plastika miloko maitso. Valo ny isanay, fantany ny sasantsasany taminay, fa tsy izahay rehetra, ary anisan'izany aho, fa fantany tsara fa izy no andehananay. Nitsangana izy rehefa nanatona azy izahay ary niteny tamin'ny feo mahery sy tsy mangovitra mihitsy hoe : “Raha tonga eto hitondra teny fampiononana ianareo dia miverena any amin'ny misy anareo any. Fa raha hiarahaba ahy kosa no hahatongavanareo dia mandrosoa ary ataovy toy ny any an-tranonareo ato.”
Nataon'i dadatoa Abu Majid Karaman nivanàka na teo amin'ny teniny na teo amin'ny tanjany aho. Maty an'ady ny roa amin'ny fianakaviany, ny farany teo dia ny vinantolahiny Oubada Abullaith, mpitarika miaramila tao amin'ny vondro-tafika Thowar Al Sham, izay miady eo ambany fanevan'ny Tafika Syriana Afaka. Maty maritiora nandritra ny ady nataony tao Aleppo i Oubada Abullaith. Maty nandritra ny ady hafa nitarika vondro-tafika hafa teo ambany fanevan'ny Tafika Syriana Afaka ihany koa, vola maromaro lasa izay, ny zanak'i Abu Majid, Majid Karaman.
Na dia teo aza izany famoizana izany, tsy nanaiky handray teny fampiononana avy amin'ireo fahafatesana ireo i Abu Majid. “Tsy tokony hisy teny fanaladiana amin'ny maritiora,” hoy izy, “satria manara-dia azy ireo isika.”
Mahery sy mahatapaka ny teniny. Ny mason'ity olona 50 taona ity no miteny alohan'ny isokafan'ny vavany, miely amin-kery, indrindra rehefa miresaka ny fototry ny revolisiona izy. Ny kendrona amin'ny tavany sy ny volombavany fotsy no milaza ny traikefan'ny fiainana.
Niresaka momba ireo ady tao Aleppo izahay, na ny tao an-tanàna na ny eny ambanivohitra, ary niresaka ny tetikady miaramila amin'ny fahazaran-draharahan'ny manamboninahitra miaramila azy. Liana manokana amin'ny soa ho an'ny sivily izy. Isaky ny manonona faritra na toerana izahay dia lazainy ny isan'ny mponina ao sy ny haavon-doza atrehiny raha mahatratra azy ireo ny fifanandrinana.
Mitovy amin'ny ankehitriny ny toetran'ny tanànan'i Aleppo tamin'izany fotoana. Eo ambany fahefan'ny fitondran'i Assad ny ampahany amin'ny tanàna: tafafikitra tsara ao ny tafika sy ny milisin'ny Herim-Piarovana Nasionaly fantatra amin'ny hoe Shabbiha. Ary ny faritra ivelan'ny fifehezan'ny fitondrana dia ao ny Tafika Syiana Afaka, monina ao ny vondro-tafiky ny fanoherana, sy ny an'ny Jihadista sasantsasany ary ireo sivily vitsivitsy izay tsy mety miala ny tranony na dia eo aza ny fidarohana baomba isan'andro. Ao anatin'ireto sokajy voatonona farany ireto no misy an'i Dadatoa Abu Majid sy ny fianakaviany. Raha nanontany azy ny antony mbola ijanonany eo aho dia nanonona andininy avy amin'ny Koràny izy, “Izay notapahin'Andriamanitra ho anao ihany no ho azonao.” Nanohy izy: “Ahoana no handaozako ny tranoko? Ahoana no handaozako ny kidoron'ireo efa natorian'ny maritioran'ny fianakaviako? Marina fa nandao anay ireo maritiora ireo, saingy natolony anay tamim-pitokisana izany ka tokony hajainay.”
Nangovitra aho teo am-pihainoana azy. Niteny tao anatin'ny hafanampon'ny revolisionera izay tsy mbola hitako sy tsy mbola reko hatrizay izy. Izy no nitarika ny fihetsiketseham-panoherana milamina tamin'ny andro nihaikàn-dry zareo ny fitondrana raha mbola teo ambany fanapahan'izany fitondrana izany ry zareo. Raha iverenana ny tamin'izany fotoana izany, nozarain'ny mpikatrok'i Aleppo hanaikana ny olona teny amin'ny faritra mpanohana ny fitondrana ireo trakitra revolisionera, niezahana hanokafana ny mason'izy ireo sy nandresen-dahatra azy ireo hanatevin-daharana ny revolisiona. Mpikambana teo amin'ny vaomiera revolisionera ihany koa i Abu Majid, akaikin'ny mpanao gazety sy ny mpikatroka rehetra tao Aleppo izy. Nisitraka ny fitiavana sy ny fanajana avy amin'ny ankamaroan'ny mpiadin'ny Tafika Syriana Afaka izy.
Nihodidina ny tranony izay nandokoany ny fefiny tamin'ny sainan'ny revolisiona aho. Voaloko tamin'ny saina revolisionera ihany koa ny vavahady lehibe, izany no maneho hoe hatraiza ny fifikirany tamin'io revolisiona io. Niantso ahy hiaraka aminy i Abu Majid. Niverina aho ary nahita mofomamy vita an-trano sy kafe. Niteny izy hoe : “Hano ireo mofomamy ireo ho fankalazana ny maritiora. Hano ny mofomamy ho fanajana ny mpampakatra.” Very tanteraka aho. Tsy haiko izay hataoko na handray ireo mofommy ireo na hitazona ny ranomasoko.
Tamin'ny fotoanan'ny Ramadany farany no nanaovana izany famangiana izany. Nanapa-kevitra ny handany ny volana iray manontolo tao Syria aho taorian'ny nandaozako ny firenena hiorenam-ponenana tao Torkia. Na dia teo aza ny maha kristiana ahy sy ny fampitandremana azoko raha mbola mandeha any aho, dia nahatsapa aho fa miaraka amin'ny tapaka sy namana. Nahatsapa hofihinin'ny revolisiona tsy nanavaka ny miozolomana tamin'ny kristiana aho.
Mazava sy voatondro tsara ny fangatahan'i Abu Majid. Ny vina tao aminy dia i Syria demokraty miantoka ny fahafahana ho an'ny mponina iray manontolo. Izay no niampangana azy. Izay ny helony.
Nisy naka an-keriny i Abu Majid fotoana vitsivitsy lasa izay. Naondrana tao anaty fiara hitan'ny vavolombelona rehetra fa an'ny Mandan'ny al-Nusra (Sampan'ny al-Qaeda ao amin'ny Fiposahana) izy. Nitsipaka izany toe-javatra izany na ny fambaboana an'i Abu Majid ny Nusra.
Syriana mpanao gazety sady mpikatroka i Asaad Hanna.